Diyaaraduhu waa inay abuuraan iskaashi macno leh si wax looga qabto jiritaanka deegaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaaraduhu waa inay abuuraan iskaashi macno leh si wax looga qabto jiritaanka deegaanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Socdaalayaashu waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan sida bey'ad ahaan ugu habboon badeecad ama adeeg.
Yaraynta adeegsiga balaastigga iyo qaadashada agab bey'adeed u roon kuma filna in wax laga qabto arrimaha sii waara
Diyaaraduhu waa inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si loo hubiyo in rakaabku uusan dooran gaadiid kale
Duulimaadyadu waxay halis ugu jiraan rakaabka inay u boodaan fursado badan oo deegaanka u habboon
Iyagoo abuuraya iskaashi macno leh oo wax ka qabanaya sababaha aasaasiga ah, shirkadaha duulimaadka waxay naftooda siin doonaan fursad ay ku noqdaan hoggaamiyeyaasha deegaanka ee warshadooda. Yaraynta isticmaalka balaastigga iyo qaadashada agabyada bey'adda u roon kuma filna in wax looga qabto arrimaha sii waara, inbadanna waa in la sameeyaa.
Socdaalayaashu waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan sida bey'ad ahaan ugu habboon badeecad ama adeeg, iyadoo sahanka Q1 2021 ee Sahanka Macaamiisha uu shaaca ka qaaday in 76% jawaabeyaasha adduunka ay yihiin 'had iyo jeer', 'badiyaa', ama 'mararka qaarkood' saameyn ku leh qodobkaan, sidoo kale sida anshax / bulsho ahaan masuul uga tahay sheyga ama adeeggu.
Si loo helo aqoon iyo xirfado wax looga qabto arrimaha waaweyn, shirkadaha duulimaadyada waxay saami ku yeelan karaan shirkad ka shaqeysa aagga joogtaynta ama samaynta iskaashiyo istiraatiiji ah. Si la mid ah sida Delta Line Lines ay u sifeysay warshad saliidda sifeysa 2012 si ay uga hesho amni shidaalkeeda, duulimaadyadu waa inay raadsadaan inay la mid noqdaan shirkadaha bayoolaji. EasyJet waxay iskaashi la sameysay Wright Electric sanadkii 2017 si loo sameeyo diyaarad koronto oo duula masaafo gaaban. Wright Electric waxay leedahay khibrad ay ku kasbato inay dhacdo, shirkadda EasyJet-na waxay leedahay dano gaar ah oo ku saabsan fikradda noqonaysa mid dhab ah.
Si loola dagaallamo dhaqdhaqaaqa ceebta duulimaadka, diyaaradaha waa inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si loo hubiyo in rakaabku aysan dooran gaadiid kale, gaar ahaan waddooyinka gaagaaban. Maaddaama safarka tareenka korontada uu noqdo mid caan ah - oo leh shabakado ballaadhan oo ku baahsan Yurub iyo Aasiya - duulimaadyadu waxay halis ugu jiraan rakaabka inay u boodaan fursado badan oo deegaanka u habboon. Haddii horumarka laga dhigo mid ka sii cagaaran warshadaha diyaaradda waa mid gaabis ah, markaa saamaynta ayaa noqon karta mid ballaaran.
Shirkado badan oo duulimaadyo ah ayaa bilaabay qorshooyinka dejinta kaarboonka, adeegsiga balaastigga oo yaraaday, isla markaana ka shaqeeyay sidii ay bey'adda ugu fiicnaan lahaayeen, laakiin guulahan yaryari kuma filna inay wax ka qabtaan dhibaatada ballaaran. Maalgashiga shidaalka duulimaadka waara (SAF) iyo diyaaradaha kale ee awooda ku shaqeeya ayaa ah tillaabooyinka soo socda, iskaashiyo micno lehna waxay fure u noqon doonaan in fikradahan laga dhabeeyo.
IAG oo dhowaan ballanqaaday 10% SAF isticmaalka 2030. Marka la eego miisaanka koox diyaaradeed sida IAG, maalgashiga xarun loo qoondeeyay ayaa caqli yeelan doonta. Waxay ku siinaysaa amniga sahayda waxayna u oggolaan kartaa ballanqaadyada in la dhaafo. Maalgashiga sidan oo kale ah wuxuu noqon karaa wadada horay loogu sii wado abuurista jawi guul-guul leh ee diyaarad kasta oo dooneysa inay wax ka qabato walaaca dadka safarka ah ee ku saabsan joogtaynta safarka hawada iyo mustaqbalka-caddeynta howlahooda.
Cudurka faafa ee loo yaqaan 'COVID-19' wuxuu u oggolaaday shirkadaha diyaaradaha iyo daneeyayaasha warshadaha inay tallaabo dib u qaadaan oo ay diiradda saaraan dadaallada lagu dardargelinayo horumarka hadda la sameynayo ee looga dhigayo mid duullimaad leh. Iyada oo ay u badan tahay in safarradu ay u wareegaan beddelaad kale, xulashooyin gaadiid cagaaran oo ku socda waddooyinka gaagaaban, diyaaradaha waa inay raadsadaan iskaashi wada-jir ah si horumar dheeraad ah looga sameeyo meeshan loona ilaaliyo mustaqbalkooda.
Ciel Hal-abuurka ah wuxuu dhameystirayaa ballaarinta aagga Bay ...